Xildhibaanadii Buuqa ka Abuuray Kalfadhigii Maanta Oo Eedeyn U Jeediyay Madaxweyne Farmaajo – Awdalmedia
Madaxweynaha ayaa markii uu bilaabay Khudbadda buuq iyo sawaxan kala kulmay qaar ka mid ah Xildhibaannada.
Xildhibaano ka tirsan labadda Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo in uu hareermaray qodobadii laga sugayay in uu ka hadlo.
Xildhibaanada ayaa sidoo kale xusay in Madaxweyne Farmaajo uusan ka hadlin Xasuuqii ka dhacay degaanka Gololey, Arrimaha badda sidoo kale Waqtiga rasmiga ah ee doorashada Soomaaliya ay dhici doonto.
Waxa ay sidoo kale sheegeen in ay matalaan Shacabka Soomaaliyeed, islamarkaana aysan fiirsan karin dhibaatooyinka heysta Shacabka Soomaaliyeed indhaha laga qarsado.
Xildhibaannada buuqa iyo firimbiga billaabay waxaa kamid ahaa Xasan Cabdi Ismaaciil oo laga soo doorto Jubaland, kaasoo BBC-da u sheegay inuu saluugay qodobada uu madaxweynaha kusoo qaatay khudbaddiisa.
“Xildhibaannadu deegaannadooda dhibaato ayaa lagu hayaa, deegaannadoodu cunaqabateyn ayaa saaran. Anigu Jubaland ayaan ka soo jeedaa dadkeyga waa la cunaqabateeyay, Gedo waxa ka dhacaya waad u jeedaa,” ayuu yiri xildhibaan Xasan.
Waxa uu sheegay in fursadda keliya ee ay madaxweynaha dareenkooda ku gaarsiin kareen ay ahayd kulanka maanta.
Afhayeenka xafiiska Madaxweynaha, Cabdinur Maxamed Axmed oo ka falceliyay firimbi yeerinta maanta ayaa bartiisa Facebook ku qoray:
“Geeddi socodka Dowlad dhisidda Soomaaliya heerar kala duwan ayuu soomaray. Waxaa jirtay xilli kala aragti duwanaashaha lagu xallin jiray qori caaraddiis, maantase waxay mareysaa in firimbi loo yeeriyo marka Madaxda laga aragti duwanaado. Waa horumar runtii loo qaaday dhanka dimuqraadiyadda,”
Madaxweynaha ayaa markii dambe si aan qash-qashaad lahayn u dhameystay khudbad jeedintiisa oo uu kaga hadlay arimo badan oo masiiri ah.